ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 39.5 လင်ဇီးမုန်တိုင်း မွှေတဲ့နေ့ ( အပိုင်းနှစ် )
inအချဉ်ကြီးက အချဉ်လေးကိုဖမ်း၊ အချဉ်လေးက အချဉ်ပိစိကိုရှာ၊ အချဉ်ပိစိက အချဉ်သစ်လေးတွေ မွေးမြူ နဲ့ ..........ကောင်းသဗျာ.....လောကကြီးကဟုတ်နေတာပဲ။ မသိမတတ်သူတွေကြားမှာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင်ရေးပေးတာ သာဓုပါဗျား။
ခါတိုင်း တိတ်တိတ်လေး Reader ယူဖတ်နေတာ၊ တကယ်အဟုတ်ကို မွှေနိုင်တာအမှန်ပါအကိုတို့။ ဘယ်လို ပွဲသိမ်းလိုက်လဲဆိုပြီး စောင့်ဖတ်နေတာ။ ဘာတဲ့။ 'အချဉ်ကြီးက အချဉ်လေးကိုဖမ်း၊ အချဉ်လေးက အချဉ်ပိစိကိုရှာ၊ အချဉ်ပိစိက အချဉ်သစ်လေးတွေ မွေးမြူ' ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပါပဲဗျာ။
ကိုနဗနရေးတဲ့ လင်ဇီးအချဉ်ဖမ်းသံသရာကိုဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီလင်ဇီးကို မကြိုက်နေတာကြာပေါ့.. လင်ဇီးမှမဟုတ်ပါဘူး.. Multilevel marketing(Network Marketing) ဆိုတာကြီးကို မုန်းတာ... ပိုက်ဆံလိမ်ယူနေတာပါ..
ကိုနဗနရဲ့ ပို့စ်ကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံအားပေးပါကြောင်း သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်...
မရေးဘူးနေမလို.ဘဲ ဒါပေမယ့် သိစေချင်တာလေးတွေ မျှဝေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ. ရေးလိုက်ပါတယ်
ဆေးနဲ. ရောင်းတဲ့နည်းလမ်းကို ခွဲမြင်ပေးစေချင်ပါတယ်
ရောင်းတဲ့နည်းလမ်းကို သဘောမကျရင်လဲ ကြိုက်သလို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုး ဆိုသလိုပေါ့
ဆေးနဲ.ပတ်သတ်လာရင်တော့ ဆင်ခြင်ပြီးမှ ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်
ဒီဆေးစားပြီးတော့ ညီမအမေရဲ. ဆယ်စုနှစ်ချီခံစားခဲ့ရတဲ့ အညောင်းရောဂါ လုံးဝပျောက်သွားတာ ကိုယ်တွေ.မို.ပါ
အမေ ဒီဆေးသောက်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ညီမတို. မောင်နှမတွေ ညစဉ်နှိပ်ပေးရတဲ့ တာဝန် လုံးဝပြီးဆုံးသွားတာ ၁၉၉၈ ကစပြီး ဒီနေ.အထိပါ
ညီမရဲ. ကားစီးတိုင်း မူးပြီးအော့အန်တဲ့ ရောဂါ လဲ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပျောက်သွားတာ ဒီနေ.အထိပါ
၁၉၉၈ တုန်းက စားခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ.အကြုံ ကိုပြောပြတာပါ
အခုညီမက တခြားနိုင်ငံမှာနေနေတာ ကြာပါပြီ
မြန်မာပြည်မှာ ဒီဆေးအခုဘယ်လိုစခန်းရောက်နေပြီလဲ ညီမ မသိပါ
အခုရေးရခြင်းအကြောင်းကိုလဲ ကြော်ညာတယ်လို. မထင်စေချင်ပါ
ကိုယ်တွေ. အဖြစ်အပျက်ကလေးကို သိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ. မျှဝေတာပါ
ဒီဆေး ဈေးကြီးတာ ရောင်းတဲ့စနစ်က ဟာကွက်တွေရှိတာတွေကြောင့်
ဒီဆေးမှာရှိတဲ့ တကယ့် အစွမ်းလေးတွေကို ရောင်းတဲ့စနစ်ကို ကြည်.မရတဲ့စိတ်နဲ. သိမ်းကြုံးပြီး မကဲ့ရဲ.စေချင်ပါဘူး
အကိုရေးတဲ့စာတွေကို ညီမသိပ်ကြိုက်ပါတယ် ဖတ်ပြီးတဟားဟားနဲ. ရယ်နေကျပါ
ဒီဆေးအကြောင်းကို ကိုယ့်အမြင်နဲ.သိမ်းကြုံးဝေဖန်ထားတာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
ဒါပေမယ့် အကိုရေးတဲ့စာတွေကို ဆက်ပြီးအားပေးသွားမှာပါ
Tun Lin said...
လင်ဇီးအချဉ်ဖမ်းသံသရာ....အ ရမ်း ကို သ ဘော ကျ အား ရ တယ် ဗျာ အ ကို.....အ ခု လည်း စင် ကာ ပူ မှာ အဲ့ ဒီ လို မျိုး လူ တွေ ကို အ ယုံ သွင်း ပြီး လိမ် စား နေ ကြ တယ်....မြန်မာ ပ ရိတ် သတ် ကို က ၃၀၀ ကျော် လောက် ရှိ တယ် လို့ သိ ရ တယ်....ကျွန် တော့ အိမ် ရှင် တွေ အ ပါ အ ဝင် ပေါ့ ဗျာ။